निरन्तर ओरालो लाग्दै सुनको भाउ, हेर्नुहोस आज यसरी भयो कारोबार.. – Ap Nepal
March 24, 2021 932
काठमाडौं । बुधवार सुनको भाउ स्थिर रहेको छ । नेपाली बजारमा छापावाला सुनको मूल्य स्थिर रहेको हो ।
अघिल्लो दिन तोलामा ८६ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज पनि सोही भाउ निर्धारण गरिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आज तेजावी सुनको मूल्य ८६ हजार २५० रुपैयाँ हो ।
त्यस्तै, आज चाँदीको भाउ भने सामान्य ओरालो लागेको छ । आज प्रतितोला १० रुपैयाँले घटेको चाँदीको भाउ १२ सय ४० रुपैयाँ कायम गरिएको महासंघले जनाएको छ । अघिल्लो कारोबार दिन १२ सय ५० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
Nextभारतमा कोरोनाको त्रा’स बढेसङ्गै मन्त्रालयले जारी गर्यो यस्तो सुचना ! सबैले पढेर से यर गरौ
केकी अधिकारी पछी नायिका वर्षा शिवाकोटीले गरिन प्रेमी इन्जिनिएर आशिषसँग सुटुक्क बिहे, हेरौं बाहिरिएका यस्ता तस्विरहरू
कोरोना सङ्क्र; मणबाट २० वर्षीय स्टाफ नर्ससहित दुईको मृ त्यु
के तपाईंलाई क ब्जियत छ ? ठीक बनाउने ७ घरेलु उ पायहरू हेर्नुहोस्
के घट्ला पे’ ट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर ? यसो भन्नुहु’ न्छ उद्योगमन्त्री